KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Sɛ ɔsom bi adi wo huammɔ a, ebetumi ayɛ den ama wo sɛ wubenya ɔsom foforo bi mu awerɛhyem. Nanso nya gyidi sɛ ɔsom bi wɔ hɔ a wubetumi de wo werɛ ahyɛ mu. Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔboaboaa asuafo anokwafo bi ano, na ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn ma wɔde Onyankopɔn mmara yɛɛ adwuma. Ɛnnɛ yi nyinaa, ebinom wɔ hɔ a wɔayi wɔn yam sɛ wɔde Kristo mmara bɛbɔ wɔn bra; enti Kristofo papa wɔ hɔ. Ɛhe na wɔwɔ?
Estelle a n’asɛm wɔ nhoma yi fã foforo no kae sɛ: “Me ne Yehowa Adansefo suaa ade ansa na merete Bible no ase. Mifii ase no, ankyɛ na metee Yohane 8:32 ase. Ɛhɔ kan sɛ: ‘Mubehu nokware no, na nokware no bɛma moade mo ho.’”
Ray nso, yɛaka ne ho asɛm dedaw. Asɛm bi a ɔkae ne sɛ: “Me ne Yehowa Adansefo suaa ade, na mibehui sɛ amane a nnipa hu no mfi Onyankopɔn. Mihui sɛ biribi pa bi nti na Onyankopɔn ama amanehunu ho kwan, na obeyi afi hɔ nnansa yi ara. Ɛno maa m’ani gyei paa.”
Nnipa dodow no ara abrabɔ aporɔw, enti ɛyɛ den paa sɛ yɛbɛbɔ bra pa. Nanso ɛno nkyerɛ sɛ yɛrentumi. Nnipa pii hia mmoa na wɔate Bible ase de mu nsɛm abɔ wɔn bra. Ɛno nti sɛ wokɔ wiase baabiara a, Yehowa Adansefo ne nnipa mpempem pii yɛ Bible adesua kwa. Nnawɔtwe biara, nhyehyɛe yi boa nkurɔfo ma wohu nea Bible kyerɛkyerɛ ankasa, na ɛma wɔbɛn wɔn Bɔfo no; afei nso ɛma wonya anigye wɔ asetena mu. *
Bisa Yehowa Adansefo ma wɔnkyerɛ wo nea enti a wɔwɔ awerɛhyem sɛ wɔn som no yɛ papa
Sɛ wuhyia Yehowa Adansefo a, bisa wɔn ma wɔnkyerɛ wo nea enti a wɔwɔ awerɛhyem sɛ wɔn som no yɛ papa. Pɛɛpɛɛ wɔn nkyerɛkyerɛ mu na hwɛ sɛnea wɔbɔ wɔn bra sɛ ɛte sɛn. Afei wo ara hwɛ sɛ ɔsom bi wɔ hɔ a wubetumi de wo werɛ ahyɛ mu anaa.
^ nky. 5 Sɛ wopɛ nsɛm pii a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? Yehowa Adansefo na wontintimii.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN July 2013 | Wubetumi De Wo Werɛ Ahyɛ Ɔsom Mu?